Acacia catechu (L.) en:Willd., en:Oliv.
Acacia catechu (L.f.) en:Willd. var. catechuoides (en:Roxb.)en:Prain
Acacia catechuoides (Roxb.) en:Benth.
Acacia sundra (Roxb.) en:Bedd.
↑ ၅.၀ ၅.၁ www.fao.org။ 10 February 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှားပင်&oldid=717727" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။